गोष्ठिमा गएकी उपमेयर अमेरिकामै लुकेपछी…. – Khabarhouse
गोष्ठिमा गएकी उपमेयर अमेरिकामै लुकेपछी….
Khabar house | ९ माघ २०७६, बिहीबार ०८:३५ | Comments
काठमाडौं,९ माघ । भ्रमणका लागि अमेरिका गएकी कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका उपप्रमुख (उपमेयर) दन्ता नेपाली (दर्शना) उतै लुकेकी छन् । नगरपालिका मार्फत गोष्ठिका लागि सरकारी पैसामा गएकी उपप्रमुख उतै लुकेकी हुन् । उनी गोष्ठीमा सहभागी हुन गत कात्तिकमा अमेरिका गएकी थिइन् । गोष्ठि सकिएपछि पनि उनी नेपाल नफर्किए पछि खोजी हुन थालेको छ ।
मेयर रत्नबहादुर शाहीले उपमेयरले यस बारेमा कुनै जानकारी पनि नगराएको जनाएका छन् । नगरपालिका संघ मार्फत उनी गोष्ठिमा सहभागी हुन अमेरिका गएकी हुन् । उपमेयरले भ्रमणमा जान्छु भनेपछि स्वीकृत गरिएको मेयर शाहीले बताए । अमेरिका पुगे पछि उपमेयरसँग एकपटक मात्रै सम्पर्क भएको र बिरामी भएकाले फर्कन ढिलो हुने जानकारी गराएकी थिइन् । अहिले उपमेयरको सामाजिक सञ्जाल पनि खेलेको छैन ।
सबैसंग सम्पर्क विहिन भएर उपमेयर अमेरिकामै लुकेपछि न्यायिक समिति र योजना तथा अनुगमन समिति, बजेट कार्यान्वयन तथा सुपरि वेक्षण समितिको काम प्रभावित भएको छ । योजना अनुगमन समिति, बजेट कार्यान्वयन तथा सुपरि वेक्षण समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने भएकाले सबै काम प्रभावित भएका हुन् । काम सकेका ठेकेदारहरूले भुक्तानिका दिनहुँ ताकेता गरिरहेकाले आफुलाई निकै अप्ठेरो परेको मेयर शाहीले बताए ।
आईसीएमए अर्थात् इनटर नेसनल सिटी मेनेजर एसोसिएसनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी हुन उनी अमेरिका पुगेकी थिइन् । २०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी के’न्द्रबाट उमेदवार भएकी दन्ता १ हजार ८४३ मत ल्याएर उपमेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् । प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी शाहीले १ हजार २६० मत ल्याएकी थिइन् । मेयर रत्न शाही पनि माओवादी केन्द्रबाटै उमेदवार भइ निर्वाचित हुन् ।